January 9, 2022 - Achawlaymyar
ဒီအချက် (၅)ချက်လုံးကြုံဖူးပြီးပြီဆိုရင်တော့ သင်ဟာရင့်ကျက်တည်ငြိမ်သူတစ်ယောက်ပါ
January 9, 2022 by Achawlaymyar
ရင့်ကျက်တယ်ဆိုတာ တကယ်တော့ မလွယ်ပါဘူး။ လူတစ်ယောက် ရင့်ကျက်လာဖို့ဆိုတာ အသက်အရွယ် အပိုင်းအခြားပေါ်မှာ မူတည်တာမဟုတ်ဘဲ၊ သူ့ရဲ့ ဘဝ အတွေ့အကြုံအပေါ်မှာသာ မူတည်နေတာပါ။ တကယ်လို့သင်ဟာ ဒီအချက်တွေနဲ့ ကိုက်ညီနေတယ်၊ ဒီအရာတွေကိုကြုံဖူးတယ်ဆိုရင်တော့ အသက်အရွယ်ပဲဖြစ်ဖြစ် သင်ဟာ ရင့်ကျက်နေပါပြီ။ (၁) အားမတန်လို့ မာန်လျှော့ခဲ့ရဖူးတယ် သင့်ဘဝမှာ သင်ဘယ်လောက်ပဲ မှန်နေခဲ့ရင်တောင် တစ်ဖက်လူက ကိုယ့်ကိုနိုင့်ထက်စီးနင်း လာလုပ်တဲ့အခါ၊ ဒါမှမဟုတ် မတရားတာတစ်ခုခု တွေ့ရတဲ့အခါ၊ ကြုံရတဲ့ အခါတွေမှာ အားမတန်လို့ မာန်လျှော့ခဲ့ရဖူးတယ်ဆိုရင်တော့ သင်ဟာ ရင့်ကျက်နေပါပြီ။ ဒါဟာ လူတော်တော်များများ မလုပ်နိုင်တဲ့ မိမိရဲ့ အခြေအနေကို မိမိဘာသာ မိမိ ကောင်းစွာသိရှိ နားလည်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ (၂) လိုချင်စိတ်တွေကို ထိန်းချုပ်ခဲ့ဖူးတယ် သင်ဝယ်ချင်တဲ့ ပစ္စည်းတွေ၊ သင်သွားချင်တဲ့ နေရာတွေ၊ သင်စားချင်တဲ့ အစားအစာတွေနဲ့ … Read more
မြန်မာပြည်မှာ အားရပါးရ စားသုံးနေကြတဲ့ ကင်ဆာအေးဂျင့် စားသောက်ကုန်နဲ့ ပစ္စည်းများအကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံသည် ကမ္ဘာ့ကင်ဆာရောဂါ အဖြစ်ပွားဆုံး (၁၀) နိုင်ငံတွင် ပါဝင်လျှက်ရှိသည်။ မိသားစုတစုထဲတွင် ကင်ဆာဝေဒနာရှင် (၃) ဦးထက်မနည်း တွေ့နေပြီ ဖြစ်ပါသည်။ အရမ်းအဖြစ်များပြီး ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ ကင်ဆာဖြစ်စေတတ်သည့် အကြောင်းရင်းများကို မဖြစ်ခင် ရှောင်ရှားနိုင်အောင် ဖော်ပြပေးလိုက်ပါသည်။ ၁။ ကင်ဆာကြောက်ရင် ပလတ်စတစ်နဲ့ ဖော့ဗူးရှောင် ပလပ်စတစ်တွင်ပါဝင်သော ကင်ဆာဖြစ်စေသည့် စတိုင်ရင်း (Styrene) ဓါတ်နှင့် ဒိုင်အောက်ဇင်းဓါတ်များသည် ပူသောအစားအစာ ဆီပါဝင်သောအစားအစာနှင့် ရေခဲသေတ္တာထဲတွင် အစားအစာကို ပလပ်စတစ်နှင့်ထည့်၍ သိုလှောင်ထားပါက အစားအသောက်ထဲသို့ ဓါတ်ပြုပျော်ဝင်၍ ရင်သားကင်ဆာနှင့် ကင်ဆာအမျိုးမျိုး ဟော်မုန်းအပြောင်းအလဲဖြစ်ခြင်းနှင့် မျိုးပွားမှုကို ထိခိုက်ခြင်းတို့ကိုဖြစ်စေပါသည်။ (သားသမီးမရသောစုံတွဲများ သတိချပ်ကြပါ။) မွေးကာစကလေးများကို ပလတ်စတစ်နို့ဗူးဖြင့် နို့မှုန့်တိုက်ခြင်းကို လုံးဝရှောင်ကြဉ်သင့်သည်။ မိခင်နို့ကို … Read more
ရဟန်းနဲ့ ဥပုသ်သည်တွေ ညစာ မစားရတဲ့ တကယ့်အကြောင်းရင်း အမှန်…
ဒီနေ့အောင်မြင်ရေးစာအုပ်တစ်အုပ်ဖတ်ရင်း တွေးမိတာလေးတစ်ခုကိုပြောပြပါမယ်။ စာအုပ်ထဲမှာကတော့ ညစာမစားသင့်ကြောင်းရေးထားတာပါ။ ဘာအတွက် ရဟန်းဝတ်တာလဲ? ကျနော်တို့ ဥပုသ်စောင့်ရင် ဘာအတွက်ညစာမစားတာလဲ? သိဒ္ဓတ္ထကိုတစ်စုံတစ်ဦးက သင်ဘာလို့ fasting လုပ်သလဲ (ညစာမစားတာလဲလို့) မေးပါသတဲ့။ သိဒ္ဓတ္ထက “I can think … I can wait … I can fast” လို့ဖြေပါသတဲ့။ I can wait – being able to plan for long-term and properly allocate my resources for the long game. စိတ်ရှည်စွာစောင့်စည်းခြင်းအလေ့အကျင့်ကို မွေးမြူတာပါပဲ။ အဲသည်လို စိတ်ရှည်ခြင်းအလေ့အကျင့်ဖြင့် သူများမေးရင် စိတ်ရှည်စွာဖြေမယ်။ ရေရှည်အောင်မြင်ဖို့ စိတ်ရှည်စွာစီမံမယ်။ … Read more
ဘမ်ိဳးဘိုးတူ အိျႏၵာေက်ာ္ဇင္ ၂၀၀၁ ခုႏွစ္က ျပင္သစ္နိုင္ငံမွာ ျပဳလုပ္တဲ့ Pan-Asia Film Festival မွာ ထိုင္း႐ုပ္ရွင္ ဒါ ရို က္ တာ ရို က္တဲ့ ထိုင္း သမိုင္းေၾကာင္းဆိုင္ရာ ဇာတ္ကားတစ္ကားျပပါတယ္။ ၁၈ ရာစုမွာ ဗမာဘုရင္ေတြ ယိုးဒယားကို စစ္ခ်ီတဲ့ ျပကြက္ေတြ ပိုပိုသာသာ ရို က္ျပထားတဲ့ ဇာတ္ကားပါ။.. ဇာတ္ကားျပေနတုန္း မၿပီးခင္ သိပ္လွတဲ့ မင္းသမီးတစ္ေယာက္က ႐ုပ္ရွင္ျပခန္းထဲက ထ ထြက္သြားပါတယ္။အဲဒီ ထိုင္း ဒါရို က္တာဟာ ႐ုပ္ရွင္ပြဲေတာ္ရဲ့ အေကာင္းဆုံး ဒါရိုက္တာဆုကို ဆြတ္ခူးခဲ့ၿပီး ထိုင္းနိုင္ငံျပန္ေရာက္တဲ့အခါ ထိုင္းမီဒီယာေတြမွာ ျပင္သစ္႐ုပ္ရွင္.. ပြဲေတာ္ အေၾကာင္း ေျဖၾကားတဲ့အခါ သူ႔႐ုပ္ရွင္ မၿပီးခင္ ထ ထြက္သြားတဲ့ မင္းသမီးဟာ … Read more
“ဒုတ် ပါလာလို့သာ ယောက်ျားဖြစ်ပြီး သော.က်ဆ.င့်မရှိတဲ့ အဖွဲ့အစည်း”ဆိုပြီး မအလ တွေကို ဒဲ့ဝုန်းလိုက်တဲ့ ချမ်းချမ်း
“ဒုတ် ပါလာလို့သာ ယောက်ျားဖြစ်ပြီး သေ.ာက်ဆ.င့်မရှိတဲ့ အဖွဲ့အစည်း”ဆိုပြီး မအလတွေကို ဒဲ့ဝုန်းလိုက်တဲ့ ချမ်းချမ်း အဆိုတော် ချမ်းချမ်းကတော့ အနုပညာလောကမှာ ဒိတ်ဒိတ်ကျဲ အောင်မြင်မှုတွေရရှိထားတဲ့ သူတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး ပရိသတ်အားပေးမှုကိုလည်း များစွာရရှိထားတဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုကြာ အနုပညာအလုပ်တွေကို ကြိုးစားလုပ်ကိုင်ခဲ့တဲ့ သူမကအချစ်သီချင်းတွေသာမကပဲ အဆွေးသီချင်းတွေကိုလည်းစိတ်ခံစားချက်အပြည့်နဲ့ သီဆိုလေ့ရှိတဲ့ သူတစ်ယောက်ပါ။ အခုလိုအောင်မြင်မှုတွေရရှိခဲ့တဲ့ချမ်းချမ်းဟာ လက်ရှိမှာဆိုရင် ခင်ပွန်းသည်ရှိရာ အီတလီမှာ သွားရောက် နေထိုင်နေတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ခုတခါမှာတော့ ချမ်းချမ်းက…”မု.ဒိမ်.ကျင့်ခံရလို့ အပျိုရည်ပျက်ဦး ဗိုက်ကြီးပါစေဦးတော့ အဲ့လူမျိုး အဲ့ဒေသကို နှိမ်လိုက်ရတယ် အဲ့မိန်းမ အဆွေအမျိူးတွေ သိက္ခာကျပြီလို့… လုံးဝ လုံးဝ မတွေးထင်လိုက်ပါနဲ့…မိန်းမတစ်ယောက်ရဲ့ အနှစ်သာရနဲ့ လူမျိုးတစ်မျိုး ဂုဏ်သိက္ခာအဆင့်အတန်းဟာ ယော.နိ (V*a*i*a)မှာ ရှိမနေဘူး ဒုတ် ပါလာလို့သာ ယောက်ကျားဖြစ်ပြီး သေ.ာက်ဆ.င့်မရှိတဲ့ အဖွဲ့အစည်းပါဆိုတာ ကိုယ်အထုပ်ကိုယ်ဖြည် … Read more
မိုးပျံပူဖောင်းစီးရင်း အမြင့်ပေ 10,000 ရောက်မှပြုတ်ကျကာ သွားခဲ့ရတဲ့ သားအမိနှစ်ယောက် (ရုပ်/သံ)
မိုးပ်ံပူေဖာင္းစီးရင္း အျမင့္ေပ 10,000 ေရာက္မွျပဳတ္က်ကာ ေသဆုံးသြားခဲ့ရတဲ့ သားအမိႏွစ္ေယာက္(႐ုပ္/သံ) တ႐ုတ္ႏိုင္ငံမွာ ေနထိုင္တဲ့သားအမိႏွစ္ေယာက္ဟာ မိုးပ်ံပူေဖာင္းစီးရင္း အျမင့္ေပ 10,000 ေရာက္မွမိုးပ်ံပူေဖာင္းေပါက္ကြဲသြားခဲ့လို႔ ျပဳတ္က်ကာေသဆုံးသြားခဲ့ရမႈျဖစ္ပြားခဲ့ပါတယ္ ။ အဆိုပါ Video ကိုတ႐ုတ္ social media site ျဖစ္တဲ့ Weibo မွာေတာ့ ေဖာ္ျပထားပါတယ္ ။ အဆိုပါအျဖစ္အပ်က္ဟာ ၿပီးခဲ့တဲ့ ေအာက္တိုဘာလ 1ရက္ေန႔မွာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ Shandong ျပည္နယ္မွာ ျဖစ္ပြားခဲ့တာျဖစ္ၿပီး video ထဲမွာ အေမျဖစ္သူႏွင့္ သမီးျဖစ္သူတို႔ဟာ တစ္ေယာက္ထိုင္ခုံ ႏွင့္ တစ္ေယာက္တစ္ဖက္စီခြဲထိုင္ကာ မိုးပ်ံပူေဖာင္းစၿပီးစီးခဲ့တာပါ ။ တျခားမိုးပ်ံပူေဖာင္ေတြလို ခရီးသြားဧည့္သည္ေတြတက္စီးဖို႔ ျခင္းေတာင္းမ်ိဳးမပါရွိပါဘူး ။ မိုးပ်ံပူေဖာင္း တစ္ခုလုံးက လုံးဝကိုမခိုင္ခံ့တဲ့ပုံစံမ်ိဳးႏွင့္ ႀကိဳးမ်ားျဖင့္သာခ်ိတ္ဆြဲထားတာကိုလည္း ေတြ႕ရွိရမွာပါ ။ အဆိုပါ မိုးပ်ံပူေဖာင္းဟာ ၎တို႔သားအမိႏွစ္ေယာက္လုံးကို … Read more
ယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့ ကလေးထိန်းတစ်ဦးထံ ခြောက်လသားအရွယ် ရင်သွေးလေး ပို့ဆောင်ပြီးနောက် ၎င်းတို့ရဲ့ရင်သွေးလေးကို ဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့ မိဘနှစ်ပါး
မလေးရှား ဇနီးမောင်နှံစုံတွဲတစ်တွဲဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ ဒီဇင်ဘာ ၂၈ ရက်နေ့က စင်္ကာပူနိုင်ငံ၊ Sengkang မြို့ရှိ ကလေးထိန်းတစ်ဦးထံ ၎င်းတို့ရဲ့ရင်သွေးလေးကို ပို့ဆောင်ခဲ့ပြီးနောက် ၎င်းတို့ရဲ့ရင်သွေးလေးကို ဆုံးရှုံးခဲ့ရပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ အင်္ဂါနေ့ ညနေ ၆ နာရီ ၂၅ မိနစ်မှာ သဘာဝအတိုင်းသေဆုံးမှုဖြစ်စဉ်နှင့်ပတ်သက်ပြီး ၎င်းတို့ဟာ စိတ်မကောင်းစရာဖုန်းခေါ်ဆိုမှုတစ်ခုကို လက်ခံရရှိခဲ့ကြောင်း ရဲတပ်ဖွဲ့က The Straits Times သို့ ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ အသက်ရှုရပ်ကာ သတိလစ်သွားပြီးနောက် ကလေးငယ်အား အထွေထွေရောဂါကုဆေးရုံကြီးသို့ အမြန်ပို့ဆောင်ခဲ့ပေမဲ့ ဆေးရုံရောက်ရောက်ချင်းမှာဘဲ ဆရာဝန်များက အသက်မရှိတော့ကြောင်း ကြေညာခဲ့ကြောင်း ရဲတပ်ဖွဲ့က ပြောကြားခဲ့ပြီး လောလောဆယ်တော့ ၎င်းတို့က ဒီအမှုကို စုံစမ်းနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။ မိဘနှစ်ပါးဖြစ်တဲ့ Yong Zhen Cheng အမည်ရှိအမျိုးသား နှင့် Du Jing Lei … Read more
စကစ ကအရာ႐ွိ တစ္ေယာက္နဲ႔ ကားထဲမွာအနမ္း မိုးေတြ႐ြာ ေနတဲ့ ပုံေတြထြက္ေပၚလာ တဲ့ သံသာမိုးသိမ့္
စကစ ကအရာ႐ွိ တစ္ေယာက္နဲ႔ ကားထဲမွာအနမ္း မိုးေတြ႐ြာ ေနတဲ့ ပုံေတြထြက္ေပၚလာ တဲ့ သံသာမိုးသိမ့္ ပရိသတ္ႀကီးေရ သ႐ုပ္ေဆာင္ သံသာမိုးသိမ့္ တစ္ေယာက္ အခုလက္႐ွိမွာ ဝရမ္းထုတ္ထား ခံရလို႔ ထြက္ေျပးေန တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ေႏြဦးေတာ္လွန္ ေရးမွာပါဝင္ေသာ္ လည္း ဝရမ္းထုတ္ခံရၿပီးေနာက္ မွာေတာ့ ဘာအသံမွ ထြက္မလာေတာ့ဘဲ တိတ္ဆိတ္ေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။ လတ္တေလာ မွာလည္း သူ႕ခ်စ္သူနဲ႔ ႐ိုက္ထားတဲ့ ဓာတ္ပုံေတြ ထြက္ေပၚေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။အရင္တစ္ခါ တင္တုန္း ကေတာ့ သူမေၾကာင္း ျငင္းထားေပမယ့္ ဒီတစ္ခါကေတာ့ အမႈကေန ေ႐ွာင္ လို႔ရေအာင္ တပ္ပိုင္ေျမအျဖစ္ ခံယူလိုက္တာ ျဖစ္ေလာက္ပါတယ္။ အရင္ နာမည္ထြက္ခဲ့တဲ့ HD ေတြကေတာ့ သံသာမိုးသိမ့္ အစစ္မဟုတ္ပါဘူးေနာ္မဟုတ္တာေတြ ကိုတကယ္ အမွန္လို ေျပာေနတာ ကိုေတာ့ … Read more
သ႐ုပ္ေဆာင္မိုးေဟကိုႏွင့္ လင္မယားအျဖစ္မွ ကြာရွင္းခဲ့တဲ့ ညီညီထြန္း မွ အမ်ားသိေစရန္ ေၾကညာလိုက္ၿပီ
သ႐ုပ္ေဆာင္မိုးေဟကိုႏွင့္ လင္မယားအျဖစ္မွ ကြာရွင္းခဲ့တဲ့ ညီညီထြန္း မွ အမ်ားသိေစရန္ ေၾကညာလိုက္ၿပီ ပရိသတ္ေတြရဲ႕အားေပးမႈအျပည့္အဝရရွိထားတဲ့မင္းသမီးေခ်ာေလးမိုးေဟကိုကေတာ့အႏုပညာ နယ္ပယ္မွာေအာင္ျမင္မႈရရွိထားသလိုကိုယ္ပိုင္ထုတ္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းလုပ္ၿပီး႐ုပ္ရွင္ဇာတ္ကား ေပါင္းမ်ားစြာလည္း႐ိုတ္ကူးေပးေနတာျဖစ္ပါတယ္။ မိုးေဟကိုကေတာ့မၾကာေသးခင္ကခင္ပြန္းေဟာင္းဦးညီညီထြန္းနဲ႔တရားဝင္ကြာရွင္းထားတာလည္းျဖစ္ပါတယ္။ သ႐ုပ္ေဆာင္မိုးေဟကိုႏွင့္လင္မယားကြာ ရွင္းရာ တရား႐ုံးတြင္ တရားရင္ဆိုင္အႏိုင္ရရွိခဲ့သည္ ့ဦးညီညီထြန္းသည္ တရား႐ုံးမွ တဝက္စီ ခြဲယူရန္ သေဘာတူထားသည့္ အိမ္အား မိုးေဟကိုမွတစ္ဦးတည္း သေဘာျဖင္ ့ျပင္ဆင္ေနမႈအား ရပ္တန္႔ရန္ သတင္းစာတြင္ ေၾကျငာ ထည့္ကန္႔ကြက္။ ယခုအခါ ယင္းအမိန္႔ ဒီကရီကို ေနျပည္ေတာ္၊ ျပည္ေထာင္စုလြတ္ေတာ္ခ်ဴပ္သို႔ အယူခံအဆင့္ဆင့္ဝင္ခဲ့ၿပီး ရန္ကုန္တိုင္းတရာလႊတ္ေတာ္၏ အမိ န္႔ဒီကရီကိုအတည္ျပဳခဲ့ၿပီးျဖစ္၍ ယင္းအမိန္႔အတိုင္းဆက္လက္ေဆာင္႐ြက္ေနေၾကာင္းသိရပါသည္။crd သရုပ်ဆောင်မိုးဟေကိုနှင့် လင်မယားအဖြစ်မှ ကွာရှင်းခဲ့တဲ့ ညီညီထွန်း မှ အများသိစေရန် ကြေညာလိုက်ပြီ ပရိသတ်တွေရဲ့အားပေးမှုအပြည့်အဝရရှိထားတဲ့မင်းသမီးချောလေးမိုးဟေကိုကတော့အနုပညာ နယ်ပယ်မှာအောင်မြင်မှုရရှိထားသလိုကိုယ်ပိုင်ထုတ်လုပ်ရေး လုပ်ငန်းလုပ်ပြီးရုပ်ရှင်ဇာတ်ကား ပေါင်းများစွာလည်းရိုတ်ကူးပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ မိုးဟေကိုကတော့မကြာသေးခင်ကခင်ပွန်းဟောင်းဦးညီညီထွန်းနဲ့တရားဝင်ကွာရှင်းထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ သရုပ်ဆောင်မိုးဟေကိုနှင့်လင်မယားကွာရှင်းရာ တရားရုံးတွင် တရားရင်ဆိုင်အနိုင်ရရှိခဲ့သည် ့ဦးညီညီထွန်းသည် … Read more
Categories Uncategorized, ၾကားသိရသမွ် Leaveacomment
လူတွေက တိရိစ္ဆာန်တွေမှာလည်း နှလုံးရှိတယ်လို့ ပြောကြတဲ့အခါ၊ လူသားတို့ဟာ ၎င်းကို အလေးအနက်ထားခဲကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျွဲတစ်ကောင်က သူ့အသက်အတွက် တောင်းပန်နေတာကို ပြသထားတဲ့ ဗီဒီယိုအတိုလေးတစ်ခုက လူသားတို့ဟာ စိတ်ခံစားမှုရှိတဲ့သူမဟုတ်ကြောင်း သက်သေပြခဲ့ပါတယ်။ ၎င်းအဖြစ်က တရုတ်နိုင်ငံရှိ သားသတ်ရုံတစ်ခုတွင် ကိုယ်ဝန်ဆောင်ကျွဲတစ်ကောင်ကို ရွေးချယ်ခံရချိန်မှ စတင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ သားသတ်ရုံက လူတွေက ၎င်းကျွဲရဲ့ကိုယ်ဝန်အကြောင်း သိလားဆိုတာက မသေချာပေမယ့် ၎င်းကျွဲကတော့ ရောင်းဖို့ ကံမကောင်းစွာနဲ့ ဆုံးဖြတ်ခံခဲ့ရပါတယ်။ . ၎င်းကျွဲဟာ သားသတ်ရုံသို့ ဆွဲခေါ်ခံခဲ့ရပြီး တရုတ်နိုင်ငံတောင်ပိုင်း၊ Guangdong ပြည်နယ် Shantou မြို့မှာ ရှိတဲ့ သားသတ်ရုံ၌ လူတွေရိုက်ကူးထားတဲ့ ဗီဒီယိုအတိုလေးဟာ အွန်လိုင်းမှာ ကြည့်ရှုသူ သန်းချီပြီး လျင်မြန်စွာ ပျံ့နှံ့သွားခဲ့ပါတယ်။ ဗီဒီယိုအတိုလေးထဲမှာတော့ သားသတ်ရုံက အလုပ်သမားလို့ ယူဆရတဲ့ အမျိုးသားတစ်ဦးဟာ ကျွဲကို … Read more